Ahoana ny fomba hamoronana ny vokany "Andy Warhol" | Famoronana an-tserasera
Jorge Neira | | maro
Ny famolavolana dia misy curiosities marobe, izany hoe, maro amin'ireo olona manapa-kevitra ny hiditra amin'ity hetsika ity matetika no voasarika amin'ny vokany manokana, izay, amin'ny ankamaroan'ny tranga, matetika dia miteraka matihanina amin'ny famolavolana maro.
Na izany aza, tsy manilika ireo tranga ireo izay tokony nianarana ny famolavolana sary amin'ny alàlan'ny torolàlana akademika indrindra azo atao, ary amin'ny ampahany betsaka, maro amin'ireo mpanao sary mpanamboatra sary Tokony hiditra an'ity famaizana ity izy ireo amin'ny fanarahana torolàlana sy torolàlana amin'ny Internet.
Anisan'ireo tolo-kevitra marobe hitantsika, ny famolavolana dia matetika mifandray amin'ireo vondrona mifamatotra amin'ny fironana sasany amin'ny resaka azy ireo lamaody sy fomba manondro, ohatra iray amin'izany zavakanto an-tanàn-dehibe, manasongadina ny famelabelarana ny litera sy ny volavolan-tanàna.
Afaka miresaka momba izany koa isika mpanao hosodoko nomerikaIreo izay mampiasa fitaovana famolavolana hanaovana ny maodely sy ny asany, asa izay mendrika ny faharetana sy fanoloran-tena amin'ny farany. Fa farany, ny famolavolana dia fifehezana izay mankafy ny fanao rehetra, manasongadina ny karazany rehetra ny kolontsaina sy ny fironana, manao azy ho iray amin'ireo kariera feno indrindra raha ny momba ny guilda azy.
Androany dia manolotra fampianarana izahay izay hamela anao hamorona ny Vokany "Andy Warhol", ireto ny dingana hamoronana azy:
Amin'ny voalohany, mifantina ny sary tiana hamboarina izahay momba ny vokatray.
Avy eo dia mampiasa ny fitaovana penina izahay ary manapaka ny any aoriana.
Ankehitriny rehefa manana ny sary tsy misy ambadika isika, dia mankany amin'ny Image - Threshold ary mamindra ny totozy mandra-pahitanay ny valiny tianay. Ilaina ny mampahafantatra anao fa ny Valiny 127 mety ho teboka fanondroana tsara.
Izahay dia manao tahaka ny vokarin'ny tokonam-baravarana ary ao amin'ny sary kely mampiseho ny sary, izay ao amin'ny takelaka fisosana no hanindry ny CTRL.
Miaraka amin'ny fitaovana paosy siny, azontsika atao ny mandoko ny safidinay manontolo mba ho fotsy.
Avy eo mampiditra sivana izahay, izay, miroso amin'ny Menu - Sivana - Artistic.
Manova ny sosona ho maizina isika.
Ankehitriny dia tsy maintsy miloko ny asantsika isika ary noho izany, tsindrio ilay sary kely sosona raha mitazona ny lakilen'ny Ctrl izahay, izay natao mba hamerenana ny safidintsika izay efa nataontsika teo aloha.
Mamorona sosona vaovao Menu - Layer - New - Layer izahay. Ataontsika eo ambanin'ny tany am-boalohany izany, ho avy eo safidio ny loko tianay. Miaraka amin'ny fitaovana vilany hosodoko dia hameno ny sosona vaovao isika.
Raha te-hamorona fomba Warhol isika, dia ho ampy ny famerenana ity dingana ity miaraka amin'ny loko hafa, ka mamokatra ny vokatra irina.
Mety ho somary sarotra ihany ny hahatratrarana izany, na izany aza, ho mora kokoa ny fomba fiasa rehefa mijanona amin'ny fampiharana isika, hatramin'ny vokany warhol Tsy dia sarotra araka ny fijeriny azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba hamoronana ny vokatra "Andy Warhol"
Zavatra tokony hianarin'ny mpamorona sary ao amin'ny oniversite